China Casual Backpacks factory na suppliers | V-Fox
Mmadụ Bịa ka The Esquire mbianye. Kpamkpam nyochara. N'ịbụ vetted. Ndị a họpụta mmadụ bụ ụzọ kasị mma na-eji ike gị-akwụ ego.
Backpacks na-akpa ndị mmadụ. Anyị na-amalite site na iji ha nọ n'ụlọ akwụkwọ praịmarị na lug gburugburu akwụkwọ na ji ede na dope pensụl ikpe (soft shells naanị, ekele). Na dị ka akwụkwọ na-aga n'ihu, na backpacks na-oyi na ndị ọzọ kpachaara anya. Anyị Jansport amama n'ime a Fjallraven, nke amama n'ime a Herschel. Na ndị backpacks niile ukwuu n'ihi na mfe mkpa! N'ihi na akpa nke ndị mmadụ, e nwere ihe ọjọọ ọ bụla na-aza, na-aza mma ruru eru ka n'ọnọdụ ụfọdụ. Na mgbe ọ na-abịa ọkachamara na nzukọ, ọ bụ ọnụ ahịa na-achọ ihe na-eme ọrụ nri gị.
N'ihi na kwa ụbọchị akpa, e nwere ihe nkịtị, na mgbe ahụ, e nwekwara ukporo. Ma eleghị anya, na-ekwesịghị-eweta ya na-arụ ọrụ na ụdị ukporo. Ebe ihe na-ọdịdị iti elu ma ọ bụ prepped maka a ibugo onu ga-eme ihe uku gị ịke, Dakota bụ ukporo-enweghị ndidi kwa ukwuu. The neoprene na-enye ya a jụụ anya, nke na-anọchi si a ọkọlọtọ kwaaji, na niile-n'elu agba? Na-eme ya di ntakiri. Ma nke ndị ọcha bụ oké mkpa nke na-eme ya anya ọma kwa ụbọchị, n'agbanyeghị ihe ị na-yi ma ọ bụ ebe ị na-aga. I nwere ike na-aga aga ọrụ, na-amụ ya, na-enwe obi ụtọ hour enweghị mgbe mmetụta under- ma ọ bụ overdressed.
Function ụzọ bịara na a haziri. E nwere bụghị a zuru ezu nke na-adịghị ịmata zubere si mee ịnweta stof n'ime gị akpa dị mfe dị ka o kwere omume. Na mgbakwunye na padded laptọọpụ ikpe, nke bụ pa azu paaki N'ezie ụbọchị ndị a, e nwekwara nkọwa na mpụga nke mkpọ na-eme ka ime-anọ mma n'anya na mma n'anya. Tinye gị igodo na wallet ke n'ihu pouch, gị ekweisi ke n'akụkụ zip, na aka gị sanitizer na mbughari pouch. Idebe ihe nile dị mkpa ebe i nwere ike iru ha na-egbochi gị na-enwe igwu site gị akpa mgbe ọzọ.
The neoprene ákwà guzo kasị, ma ọ bụrụ na anyị na-ekwu okwu nkọwa. Nke ahụ bụ n'ihi na ọ dịghị anya dị ka ákwà ndị ọzọ backpacks na-mere nke-abụghị a adịteghị kwaaji ma ọ bụ a hefty ballistic naịlọn. Ọ na-ese nro na bouncy na ala na-eyi. Ma ọ bụ ndị nile na ihe! Ma, ọ bụ a ọtọ ákwà, kwa. Ọ owú mmiri mmiri, na-akasị na ụdị nke mmiri ozuzo ma ọ bụ ajirija. Nke ahụ pụtara na ị na-adịghị echegbu onwe ukwuu banyere ijide na a oké mmiri ozuzo na ị pụrụ itinye sweaty mgbatị uwe ya n'achọghị ya ga-esi isi. Ndị na-dị oké mkpa mmiri maka a akpa na ị ga-achọ iji kwa ụbọchị na ruo ogologo oge na-abịa. Ọ bụrụ na ị chọrọ ọcha ya, n'aka-asa ya ka ọ na ikuku na-akọrọ. Ị ga a ọhụrụ akpa site ụtụtụ.